Soo iibso galoofyada feedhka ee haragga maqaarka ee 'PU' oo loogu talagalay Ragga Haweenka & Carruurta ah - Maraakiib Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
KU GADO KALSOONI | Hel Waxyaabo Cajiib ah
★ Ma Jirto Wax Canshuur VAT ah
Galoofyada feedhka haraaga PU Haragga Ragga Dumarka & Caruurta
$ 28.99 qiimaha joogtada ah $ 44.99
US Size 12 OZ 8 OZ 10 OZ 4 OZ 6 OZ
Color Pink Red Gold Black
12 OZ / Pink 8 OZ / Pink 10 OZ / Pink 4 OZ / Pink 6 OZ / Pink 10 OZ / Casaan 10 OZ / Dahab 12 OZ / Dahab 6 OZ / Dahab 8 OZ / Dahab 12 OZ / Madoow 4 OZ / Casaan 4 OZ / Dahab 6 OZ / Casaan 8 OZ / Madoow 8 OZ / Casaan 10 OZ / Madoow 4 OZ / Madoow 6 OZ / Madoow 12 OZ / Casaan
Gacan-gashiyada feedhka ee haragga PU Haragga Ragga Dumarka & Carruurta - 12 OZ / Pink gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Dadka Khusayso: Male
Number Model: 2754
size: 6-12 OZ
Gacmo Gelinta Kick Boxing Kick for Women Ragga
Miisaan: 500g halkii lammaan
Cabbirka: 4 OZ, 6 OZ, 8 OZ, 10 OZ, 12 OZ
Ku habboon: Dadka waaweyn, Ragga, Haweenka
Muuqaalka la adeegsan karo: Karate / Muay / Thai / Fight Fight / MMA / Sanda / galoofiska tababbarka
Chart Size: Xusuusin: Fadlan u oggolow 1-2cm cabbirka leexashada iyada oo loo eegayo cabirka gacanta. Sababo la xiriira kormeerayaasha kala duwan iyo xaaladaha iftiinka, midabada ayaa wax yar ka duwanaan kara sawirrada la taxay Sida loo Xulo Cabirka:
4 OZ: 3-5 sano jir caruur ah (Balac balaaran <5cm iyo Balac dherer <13cm)
6 OZ: 6-11 sano jir caruur ah (Falmarka fidsan inta u dhaxaysa 5-6.5cm iyo dhererka Palm inta u dhaxaysa 13-16cm)
8 OZ: 12-15 sano buuran dhalinyaro ah (Balaca ballaca inta u dhaxaysa 6.5-7.5cm iyo dhererka timireed inta u dhaxaysa 15-18cm)
10 OZ: lab ama dheddig ah (ballaca Palm inta u dhaxaysa 7.5-8.5cm iyo dhererka timireed inta u dhaxaysa 16-20cm)
12 OZ: Ragga qaangaarka ah (Balaca ballaca> 8.5cm iyo dhererka baaldiga u dhexeeya: 19-22cm)
Асибо! Ерчатки хорошего качества. Оставка в срок. Еще и подарочки приложили)
todo ok, excelente producto, gracias x el regalo
tayo wanaagsan u leh carruurta da'da 8. si fiican u tolay. mahadsanid hadiyadda.
kaliya helay. Muuqaalka koowaad waa fiican yahay. Waxaan bixin doonaa jawaab celin dheeri ah ka dib isticmaalka
Ерчатки супер !!! Илетели быстро !!! Очке 11 лет заказали 10 размер. Асибо продавцу за качественный товар и подарок!)
WoopShop: Goobta ugu dambaysa ee Dukaameysiga tooska ah iyo jumlada. Jumlada waxaa lagu taageeray dhammaan badeecadaha. Fadlan nala soo xiriir si aad u iibsato jumlada sida jumlada dharka, qalabka jumlada, jumlada caafimaadka leh, jumlada quruxda, jumlada moodada, iwm. Haddii aad jeclaan lahayd inaad la kulanto sida ugu wanaagsan ee wax looga iibsado internetka ee ragga, haweenka, iyo carruurta, waxaad joogtaa meesha saxda ah. WoopShop waa meesha ugu dambeysa ee loogu talagalay moodada iyo qaab nololeedka, iyada oo marti loo yahay noocyo kala duwan oo ganacsi oo ay ka mid yihiin dharka, kabaha, qalabka, dahabka, alaabta daryeelka shakhsi ahaaneed iyo inbadan. Waxaa la joogaa waqtigii dib loogu qeexi lahaa bayaankaaga qaab-dhismeedkayaga qaan-gaarka ah ee alaabada casriga ah. Dukaankeena internetka ayaa kuu keenaya alaabtii ugu dambeysay ee naqshadeeye toos uga baxa guryaha moodada. WoopShop waxaad kaga adeegan kartaa khadka tooska ah ee WoopShop adoo ka helaya raaxada gurigaaga oo waxaad ka heli kartaa waxyaabaha aad ugu jeceshahay midig albaabkaaga. shaqeynta ragga, haweenka, iyo caruurta. Waxaad ogaan doontaa in cirka uu yahay xadka marka ay timaado noocyada dharka ee aad soo iibsan karto munaasabadaha kala duwan. Dharka ragga casriga ah - WoopShop waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarro aad u tiro badan oo ah shaati rasmi ah iyo surwaal, funaanado qabow iyo jiinis, ama kurta iyo iskudhafka laysku daro ragga. Ku xir aragtidaada funaanado daabacan. Abuur muuqaal dib-u-dhiska xarunta ah oo leh funaanado kala duwan iyo joonisyo dhib badan. Ha ahaato gingham, gisi ama qaab daaqad-daaqad, shaatiyada la hubiyey inay caqli badan yihiin. Ku dhaji iyaga chinos, jiinis xiran ama surwaal la jaray si aad uhesho muuqaal caadi ah. Xulo muuqaalka lakab muuqaal leh oo leh jaakadaha rookaha. Madaxa cimilada daruuraha leh geesinimo ugu jirta jaakadaha biyaha u adkeysta. Ka eeg qaybtayada gudaha si aad u hesho dhar ku caawiya taas oo kaa dhigaysa inaad ku kalsoon tahay dhar kasta. Dharka haweenka ee casriga ah - Dukaamaynta tooska ah ee haweenka ee WoopShop waa khibrad kor u qaadaysa niyadda. U fiirso sinta oo ku raaxeeyso chinos iyo gaagaaban daabacan xagaagan. Fiiri kuleylka taariikhdaada oo ku labisan dhar yar oo madow, ama dooro dharka casaanka ee xasiloonida. Dharka la jeexjeexay iyo T-shaatiyada ayaa matalaya ruuxda caadiga ah ee moodada badda. Dooro kuwa aad ugu jeceshahay Bardot, garabka-garabka, qaabka shaatiga, blouson, xarkaha iyo dusha sare ee peplum-ka, si aad uhesho wax yar. Ku wada diyaari joonis jilicsan oo jilicsan, goonooyin ama palazzos. Kurtis iyo jooniska ayaa sameeya isku-dhafka isku-dhafan ee isku-dhafan ee loogu talagalay magaalooyinka qabow. Cunnooyinkayaga waaweyn iyo xulashooyinka lehenga-choli waxay ku habboon yihiin inay aragti ka muujiyaan munaasabadaha waaweyn ee bulshada sida aroosyada. Dharkeenna nooca loo yaqaan 'salwar-kameez', kurtas iyo Patiala suits ayaa ikhtiyaarro raaxo leh u leh xirashada joogtada ah. Kabaha moodada leh - In kasta oo dharka ay ka dhigayaan ninka, nooca kabaha aad xiran tahay ayaa ka tarjumaya shakhsiyaddaada. Waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho dhameystiran oo xulashooyinka kabaha aan caadiga aheyn loogu talagalay ragga sida kabaha isboortiga iyo rootiga. Samee bayaanka awooda shaqada oo ku labisan brogues iyo oxfords. Ku tababbar maaratoonkaaga kabaha orodka ee ragga iyo dumarka. Xullo kabo ciyaar shaqsiyeed sida tennis, kubada cagta, basketball iyo wixii la mid ah. Ama u gudub qaabka aan caadiga ahayn iyo raaxada ay bixiyaan kabaha, dhalooyinka, iyo is-rogidda. Baadhitaankeena safka ah ee kabo moodada leh oo loogu talagalay dumarka oo ay kujiraan bambooyin, kabo cidhibtiro ah, cidhibbo cirif ah, iyo qalin cidhib. Ama ku raaxayso sida ugu fiican ee raaxada iyo qaabka leh guryaha qurxinta iyo birta ah. Qalabka casriga ah - WoopShop waa mid ka mid ah bogagga internetka ee ugu wanaagsan ee laga iibsado qalabka fasalka oo si dhammaystiran u dhammaystira dharkaaga. Waxaad dooran kartaa analogga casriga ah ama saacadaha dhijitaalka ah oo aad iyaga ugu dhigmi kartaa suumanka iyo xargaha. Soo qaado boorsooyin waasac ah, boorsooyin dhab ah, iyo boorsooyin si aad waxyaabaha aad muhiimka u ah ugu keydiso qaab. Haddii aad doorbideysid dahabka ugu yar ama waxyaalaha waaweyn iyo kuwa dhalaalaya, ururintayada dahabka ee internetka ayaa ku siineysa fursado badan oo cajiib ah. Amiiraddaada yar waxay jeclaan doontaa noocyo kala duwan oo qurux badan oo qurux badan, kabo ballerina ah, duubabka madaxa, iyo goos gooska. Ku farxi wiilkaaga adoo ka soo qaadanaya kabo isboorti, funaanado superhero ah, funaanado kubada cagta ah iyo waxyaabo badan oo ka badan dukaankayaga internetka. Halkan ka fiiri safkeena alaabada lagu ciyaaro oo aad ku abuuri karto xusuus aad ku jeceshahay. Saabuunadeena, jalaatada qubeyska, kareemada daryeelka maqaarka, kiriimyada, iyo alaabada kale ee ayurvedic ayaa si gaar ah loo sameeyay si loo yareeyo saameynta gabowga isla markaana loo soo bandhigo khibrada nadiifinta ugu fiican Ka dhig nadiif madaxaaga iyo timahaaga uber-stylish leh shaambooyada iyo alaabada daryeelka timaha. Dooro qurxiyo si kor loogu qaado quruxdaada dabiiciga ah. Ku dar midab iyo dabeecad qolalkaaga jiifka qolka gogosha iyo daahyada. Adeegso miiska miiska xariifka ah si aad ugu qanciso martidaada. Qurxinta gidaarka, saacadaha, masawirrada sawirrada, iyo dhirta macmalka ah ayaa hubaal ah inay nolosha ku neefsan doonaan gees kasta oo gurigaaga ah. WoopShop waa mid ka mid ah goobaha wax iibsiga tooska ah ee internetka ee adduunka oo moodada ay u heli karaan dhammaan. Fiiri soogalootigayada cusub si aad u daawato dharka naqshadeeye ee ugu dambeeyay, kabaha, iyo agabyada ka jira suuqa. Waxaad ku heli kartaa gacmahaaga qaabka ugu wanaagsan xilli kasta oo aad xiran tahay. Waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa qaabka ugu wanaagsan ee qowmiyadaha inta lagu jiro dhammaan munaasabadaha ciidda. Waxaad hubtaa inaad la dhacsan tahay qiimo dhimistayada xilliyeed ee kabaha, surwaalka, shaatiyadaha, boorsooyinka dhabarka iyo waxyaabo kale oo badan. Iibinta dhammaadka xilli-ciyaareedku waa waayo-aragnimada ugu dambaysa marka mooddu si aan la rumaysan karin u awoodi karto. Ku dukaameyso WoopShop Kalsooni buuxda. Sababta kale ee WoopShop ugu fiican dhammaan bakhaarrada tooska ah ayaa ah dhammaystirka dhammaystiran ee ay bixiso. Waxaad ku daawan kartaa noocyada aad jeceshahay xulashooyinka qiimaha ee alaabooyinka kala duwan hal meel. A interface-user-saaxiibtinimo ayaa kugu hagi doona adiga habka xulashada. Jaantusyada cabbirka oo dhameystiran, macluumaadka sheyga iyo sawirrada xallinta sare waxay kaa caawinayaan inaad gaarto go'aamada iibsiga ugu fiican. Waxaad sidoo kale leedahay xorriyad aad ku dooran karto ikhtiyaarrada lacag-bixintaada, ha noqoto kaar ama lacag-bixinta. 15-ka maalmood ee soo noqoshada waxay ku siineysaa awood badan iibsade ahaan. Intaa waxaa sii dheer, ikhtiyaarka-iyo-iibsiga ikhtiyaariga ah ee alaabada la xushay waxay u qaadaysaa macaamil-saaxiibtinimo heerka xiga.Waxaad ku raaxeysataa khibrad-aan-dhib lahayn adigoo si raaxo leh uga dukaameysanaya gurigaaga ama goobtaada shaqada. Waxa kale oo aad wax u iibsan kartaa saaxiibbadaa, qoyskaaga iyo kuwa aad jeceshahay oo aad ka faa'iidaysan karto adeegyadayada hadiyadaha wakhtiyada gaarka ah. Android | macruufka
Ka warbixi Xuquuqda Hantida Caqliga
Xuquuqda daabacaadda HAWAFI GROUP LLC © 2021 WoopShop®.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 4.9 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 120955.
dib u eegista 120955
"Wiilka Maama" Warqadda Daabacday Wiil Ilmo Yar & Xilliga Xagaaga
Sleeve Long Solid Satin Mini Dharka Hurdada Cad ee Dumarka
Cartoon Hal abuur leh Digaag Ukun Ceramic Yolk/Kala -sooc Cad
Suunka Spaghetti Bodycon Lace Faashadda Mini Dharka Cad
Labbisku waa qurux iyo marada oo aad u tayo fiican ayaan ku talinayaa
DIY Silicone Wareegsan oo aan dheg-dheg lahayn Ukunta la shiilay iyo giraanta canjeelada